chaza – iAfrika
Imali Uma uphupha ukuthi unemali, kuwuphawu olubi futhi kuphathisa kabi uma uyisebenzisa noma uyilahla, kodwa kuyinhlanhla futhi kusho ukuthuthuka uma uyinikezwa noma uyithola. Uma uphupha ukuthi ulanda imali oyilweletisile kumuntu, kusho ukuthi kuzoba nokudlulela phambili entweni ozama ukuyenza. Uma umuntu ekunikeza imali kodwa omunye ekuphuca yona emva kwalkho, kusho ukuthi kunomuntu uzama ukukuthakatha noma ukuntshontsha … Read more
Tags Amaphupho ngemali, chaza, kwamaphupho, UKUCHAZA
Uma uphupha ukuthi ubuka izinwele zakho, uzothola uthando maduzane, kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthanda omunye umuntu. Uma uphupha ukuthi ukama izinwele zakho, kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile, futhi ukushintsha umbala wezinwele zakho kusho ukuthi kunenkatahzo ezayo. Uma izinwele zakho sezikhule kakhulu zizinde, kusho ukuthi usungumqambimanga futhi uma sezibomvu, kufanele uqaphele izitha empilweni yakho. Uma … Read more
Tags Amaphupho ngezinwele, chaza, isichazi maphupho
Read moreAmaphupho okuphonswa noma okusongelwa
Tags Amaphupho okuphonswa noma okusongelwa, chaza, isichazi maphupho
Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini. Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobongozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela kona uba nezinhlanhla futhi ayafika njalo kuwena akuvikele uma ubhekene nezingqinamba. Uma usukwenzile lokho okudingekayo namaphupho owaphupha ngalesosikhathi akhombisa ukunqoba kwakho.
Read moreAmaphupho Okunqoba
Tags Amaphupho Okunqoba, chaza, isichazi maphupho